umshini okubalulekile PC emgqonyeni - China Kingswel Imishini
HFB82PC PC Machine Ezikhethekile PC Wemigqomo
Kuyinto uchungechunge edume kakhulu nge ukuthandwa eliphakeme. It is owaziwa kumakhasimende amaningi emhlabeni wonke ngomsebenzi oncomekayo yayo, pragmatic, zakudala. Ngokusho yokufunwa ezahlukene, 25: 1 no-30: 1 extrusion izinhlelo big die ikhanda kukhona ekhethelo. Clamping uhlelo usebenzisa ezimbili uthayi-bar uhlobo idivayisi clamping nge amagiya Racks synchronously kuqondaniswe; Emqulwini izibopho isikhunta by ingcindezi ngqo; It usebenzisa eyodwa isiqeshana isikhunta platen nge X emise silingo izingalo ukwandisa sihlobene rigidity isikhunta platen; I-engeli wotho ka silingo izingalo kuyinto 45 °, okwenza isikhunta endaweni ebanzi; Uhlelo extrusion usebenzisa imvamisa ukulawula ijubane motor, kanye nenani extrusion likhulu; It usebenzisa PLC isilawuli ehlelwe eyenziwe Panasonic of Japan, zazo prorams zithuthukuselwe; Zonke Equipments kagesi zamukele imikhiqizo edumile emhlabeni wonke.
It is eziklanyelwe ukwenziwa PC ngamanzi acwebileyo ebhakedeni. Ingase futhi ukukhiqiza imikhiqizo ehlukahlukene eziyize igalelo udini eyenziwe PC ezifana lampshades, amabhodlela, amabhodwe, amathini, imiphongolo njll
∮80 / 120 (Big Die ikhanda)
Previous: umshini okubalulekile iphaneli
Okulandelayo: umshini okubalulekile 3D air imbobo
Wemigqomo Blow Molding Machine
PC Wemigqomo Blow Molding Machine
Plastic Wemigqomo Blow Molding Machine
Plastic Wemigqomo Blowing Molding
Plastic Big Wemigqomo Blowing Isikhunta
Road Wemigqomo Blow Molding Machine
ibhodlela entanyeni ahlabayo umshini
Inner kophawu umshini